Homeसमाचारनेपाली चेलीलाई बिहे गर्न पाउदा म’ख्ख भारतीय ज्वाइ, दुवै बिच यति धेरै माया (भिडियो सहित)
March 27, 2021 admin समाचार 5009
भिडियो तल दिइएको छ।
पूर्व खानेपा’नीमन्त्री बीना मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरीजलस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रको निरी’क्षण तथा अवलोकन गर्न पुगेकी छिन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका निमन्त्रणामा सुन्दरीजल पुगेकी मग:रले उक्त प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन गरेकी हुन् ।
सो अवसरमा उनले सञ्चारक’र्मीसँग भनिन्, “हाम्रो अथक मेहनत र योजनामुताबिक मेलम्ची आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको हो । उपत्य:कावासीको मेलम्चीको पानी पिउने सपना अब करिब पूरा भएको छ ।”
मेलम्चीबाट सुरुङमार्फत ल्या’इएको पानी उक्त प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन भइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिने छ । आयोजनाले मेलम्चीबाट आ’एको पानी शुक्रबार उक्त प्रशोधन केन्द्रमा हालेको छ । एक दुई दिनपछि काठमाडौँका घरघरमा मेल’म्चीको पानी आउने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले वि’भिन्न समयमा जारी गरेका तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी काम पूर्वमन्त्री मगरको कार्यकालमा भएको देखिएको थियो । मगरको कार्यकालमा सम्पन्न हुने उक्त आयोज:ना सुरुङको गेटमा आएको प्राविधिक समस्या’का कारण केही समय ढिलो हुन गएको थियो ।
इटालियन कम्पनी सी’एमसीले बीचैमा काम छाडेर गएपछि पूर्व मन्त्री मगरकै सक्रियतामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता भ’एको थियो । आफूले गरेको मेहनतको फल काठमाण्डौंबासीले पाउन लागेको भन्दै मगरले खु’शी ब्यक्त गरेकी छिन् ।
कपालमा चाया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् बच्ने उपाय
December 4, 2020 admin समाचार 9067
कपालमा चाया पर्ने सम’स्याको शिकार अ’धिकांश व्यक्ति भइरहेका हुन्छन् । जाडो होस् या गर्मी कपा’लमा चाया पर्ने समस्या हुन्छ । चायाका कारण कति’पयलाई यसले ठूलै सास्ति दिइरहेको हुन्छ भने व्यक्तिको व्य’क्तित्वमा पनि यसले असर पार्छ
October 30, 2020 admin समाचार 10750
March 19, 2021 admin समाचार 4733
चर्चित अस्ट्रे’लियन मोडेल भिक्टोरिया म्यानटिन नेपाली गीतको म्यु’जिक भिडियोमा देखिएकी छन् । गायिका सुजाता पाण्डे’को शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीत ‘सुस्तरी’मा म्यान’टिनले मोडलिङ गरेकी हुन् । म्यानटि’नले पहिलो पटक नेपाली म्युजिक भिडि’योमा मोडलिङ गरेकी
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242083)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229981)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229614)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227990)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226776)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226356)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196989)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194373)